Ogaden News Agency (ONA) – Xubin kamid ah Maamulka iyo Ururka OYSU Pacific oo warbixino ururka ku adan lawadagay ONA.
Xubin kamid ah Maamulka iyo Ururka OYSU Pacific oo warbixino ururka ku adan lawadagay ONA.
Halyay Cabdullahi Abshir:
Xubin: OYSU Pacific
Position: Public Relation.
Joined: OYSU MELBOURNE 2011.
Waxaa dhowaan Qaarada Pacific kusoo xidhmay Kulamo Ururka Dhalinta OYSU PACIF ku qabteen magaalada Perth ,halkaas oo Sanad guuradi labaad ee Midowga kaso wareegtay heer qaradeed lagu qiimeynayay. Waxaa hadaba kulankan kasoo qeyb galay dhalinyaro iyo masuliyiin kamid ah dhalinta OYSU heer qaradeed ee OYSU Pacific. Kuwaas oo aan waqti u helnay inaan su’alo kaweydino masuliyinta Ururka oo shaqoyin kala gadisan ka haya.
Dhalinta PAcific ayaa waxa warbixinta Ururka oo horey usoo daawacnay dadaalka iyo guulaha ay soo hoyeen ayaa waxa jecelnahay xubnaha Ururka ee firfircoon shaqoyinka ay qataan xubin ahaan inaan sheekoyinkoda (Profile- kooda) aan wax kasoo qadano.
Hadaba Maamulka Sare ee Pacific ayaa su’alo aan weydinay kadib waxay noo so gudbiyeen dhoor xubin oo shaqoyin badan ka qabtay ururka dhexdiisa. Xubnaha Ururka oo idil ayaa dadaalka iyo firfirconidooda ay dhamaantood isku heer yiihin balse madama oo lasoo wada daawaci karin 4 xubnood kaliya ayaa tusaale ahaan usoo qaadanayna.
Cabdullaahi Abshir waxa uu kamid yahay Ururka OYSU Melbourne. Waxa uu ururka kusoo biray waqti dhow isaga oo xubin buuxa ka noqday OYSU melbourne sanadkii 2011.
Hadaba Xubinkan ayaa waxa weydiinay mudadii uu ururka kusoo biiray waxa uu kusoo kordhiyay ururka iyo waxa uu ka faa iday ururka. Sidoo kale sababta uu u jecelyahay in dhamaan dhalinyarada Somalida Ogadeniya ee wali xubinka buuxa qaadanin inay ku biiraan ururka OYSU islamar ahaantaasna ay fikirkooda iyo aqoontodaba uga fa ideyaan bulshada. Sidoo kale waxaa xogta Mudane Cabdullaahi nala wadaagay Xubno kale oo kamid ah Ururka oo aad ugu amaanay Shaqo wanaag iyo innuu kamid yahay halbowlaha ururka OYSU ee Pacific gaar ahaan Melbourne.
Cabdullaahi Bashiir waxa uu noo sheegay innuu kamid noqday ururka 2011, mudadaas yar gudaheed uu waxyaalo badan ka dhex bartay ururka illaa heer uu gaadhay in durbaba uu noqdo Masuliyiinta Ururka. cabdullaahi waxaa loo dortay inu noqdo Hoggaanka Arrimaha Dibada Iyo Warfaafinta ururka OYSU ee Melbourne.
Wax yaalaha ugu badan oo Abdulahi uu qabtay waxaa ka mid ah qoraalo luuqada Ingiriiska (English) ku qoran oo uu daabaco si ururka OYSU Melbourn iyo Jaaliyadaba u isticmaalaan,
Sidoo kale isaga oo matalaya OYSU ayaa xirir dheeraad ah uu la leeyahay dhowr haay’adood oo xaquuqda biniaadanka u dooda. Wafti uu ku tagay guriga doowlada Australia, halkaas oo xirir la yeeshay Department of Foreign Affairs and Ausaid. Cabdullaahi waxa intaas oo xidhiidh ah uu sameyay kadib markii uu ururka OYSU ku soobiray.
Abdulahi wuxuu kujiraa halgamayaasha isbadal badan oo horumarineed ka keeni kara halganka, markuu Wadankiisa Ogadeniya xornoqdo wax barashadiisa ku anfaci doona. Abdulahi wuxuu aad u xafidsanyahay taarikhda halgnka Ogadenia, wuxuuna ku dhiira galiyaa saaxiibadiis barashada halganka Ogadenia.
Hadaba Cabdullaahi Abshir ayaa ugu baaqaya dhalinyarada Somalida Ogadeniya ee ku nool wadanka Pacific inay kusoo biiraan Ururka Dhalinta OYSU. Inay kusoo xidhmaan Jaaliyadooda Ogadeniya ee u taagan sidii Bulshada loo mideyn lahaa loona xoreyn lahaa Dhulkena Ogadeniya.
Cabdullaahi waxa uu tusaale fiican u yahay dhalinyarada Somalida Ogadeniya ee usoo kacday dhulkooda una taagan sidii ay wadamada ay ku noolyihiin u bari lahayeen qadiyada Ogadeniya.
Hadii aad tahay Xubin kamid ah Somalida Ogadeniya oo dhalinyaro ah, Waxa suurto gal ah inaad noqoto Cabdullaahi oo kale, Inaad hesho xirfad wanaagsan oo aad dadka kula hadasho, Xidhiidho heer caalami ah aad ku sameyso. Sidoo kale inaad noqoto qof caan ah u bulshadiisa laga dhex jecelyahay.
Sidaas awgeed waqti yuusan kaa lumin, waxaad si dhib yar ugu biiri karta Ururka OYSU oo ka dhisan daafaha dunida meel kasta oo aad Joogto.
cabdullaahi waa halyay. Waqtigisa iyo naftiisaba u hibeeyay Halganka Xoriyad doon ee Somalida Ogadeniya. Waxuuna kamidyahay Halyayeeda OYSU Pacific.